“Ne Dɔn Nnya Nnui”
Ɔwɛn-Aban—Nea Adesua Nsɛm Wom | September 15, 2000
KENKAN WƆ Albanian Arabic Armenian (West) Bicol Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Malagasy Malayalam Mizo Moore Myanmar Norwegian Ossetian Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Rarotongan Romanian Samoan Sepedi Shona Silozi Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tatar Thai Tswana Turkish Twi Ukrainian Urdu Vietnamese Zulu
“Obiara amfa ne nsa anka no, efisɛ ne dɔn nnya nnui.”—YOHANE 7:30.
1. Nneɛma abien bɛn na ɛkyerɛɛ Yesu nneyɛe kwan?
YESU KRISTO ka kyerɛɛ n’asomafo no sɛ: “Onipa ba no amma sɛ wɔnsom no, na ɔbɛsomee, na ɔde ne kra ayɛ agyede ama nnipa pii.” (Mateo 20:28) Ɔka kyerɛɛ Roma amrado Pontio Pilato sɛ: “Eyi nti na wɔwoo me, na mebaa wi yi ase, sɛ merebedi nokware no ho adanse.” (Yohane 18:37) Ná Yesu nim nea enti a na obewu no ankasa, ɛne adwuma a na ɛsɛ sɛ ɔyɛ ansa na wawu. Afei nso na onim bere tenten a na aka a ɔde bɛyɛ n’adwuma no awie. Ná ɔde mfe abiɛsa ne fã pɛ na ɛbɛyɛ ne som adwuma sɛ Mesia wɔ asase so. Efii ase fii ne nsu mu asubɔ wɔ Yordan Asubɔnten no mu (wɔ 29 Y.B. mu) wɔ dapɛn a ɛtɔ so 70 a na wɔahyɛ ho nkɔm no mfiase, na ekowiee ne wu mu wɔ asɛndua so wɔ saa dapɛn no mfinimfini (wɔ 33 Y.B. mu). (Daniel 9:24-27; Mateo 3:16, 17; 20:17-19) Enti, nneɛma atitiriw abien na na ɛkyerɛ Yesu nneyɛe nyinaa kwan: atirimpɔw a enti ɔbae ne hia a na ehia sɛ odi bere so.
2. Ɔkwan bɛn so na wɔka Yesu Kristo ho asɛm wɔ Nsɛmpa no mu, na ɔkwan bɛn so na ɔkyerɛe sɛ na onim nea ɛsɛ sɛ ɔyɛ?
2 Asɛmpa no ka Yesu Kristo ho asɛm sɛ ɔbarima nsiyɛfo a otutuu akwan faa Palestina asase so nyinaa kaa Onyankopɔn Ahenni ho asɛmpa kyerɛe na ɔyɛɛ anwonwade pii. Wɔkaa Yesu ho asɛm wɔ ne som adwuma a tumi wom no fã a edi kan mu sɛ: “Ne dɔn nnya nnui.” Yesu ankasa kae sɛ: “Me bere nnya nnui.” Ɛrekɔ ne som adwuma no awiei no, na ɔka sɛ, “dɔn no adu.” (Yohane 7:8, 30; 12:23) Ɛda adi sɛ nim a na Yesu nim dɔn anaa bere a na ɛsɛ sɛ ɔde yɛ n’adwuma, a na n’afɔrebɔ wu ka ho no nyaa ne nsɛm a ɔkae ne ne nneyɛe so nkɛntɛnso. Eyi a yɛbɛte ase no betumi ama yɛanya ne nipasu ne sɛnea na osusuw nsɛm ho mu nhumu, na aboa yɛn ma ‘yɛadi n’anammɔn akyi’ pɛɛ.—1 Petro 2:21.
Osii Ne Bo sɛ Ɔbɛyɛ Onyankopɔn Apɛde
3, 4. (a) Dɛn na esi wɔ Kana ayeforohyia bi ase? (b) Dɛn nti na Onyankopɔn Ba no ampene Maria nyansahyɛ a ɛne sɛ ɔnyɛ nsa a na asa no ho biribi no so, na dɛn na yebetumi asua afi eyi mu?
3 Afe no yɛ 29 Y.B. mu. Ɛyɛ bere a Yesu ankasa paw n’asuafo a wodi kan no akyi nna kakraa bi. Saa bere yi na wɔn nyinaa aba akuraa bi ase wɔ Kana wɔ Galilea mantam mu reba ayeforohyia apontow bi ase. Yesu maame Maria nso wɔ hɔ. Nsa no sa. Bere a Maria reka akyerɛ ne ba no sɛ ɔnyɛ ho biribi no, ɔka sɛ: “Wonni nsa.” Nanso Yesu bua sɛ: “Ɔbea, dɛn na me ne wo wɔ yɛ? Me dɔn nnui.”—Yohane 1:35-51; 2:1-4.
4 Yesu mmuae, “Ɔbea, dɛn na me ne wo wɔ yɛ?” no yɛ asɛm a na tete no wobisa de kyerɛ pene a obi mpene nyansahyɛ anaa adwene bi a wɔda no adi so. Dɛn nti na Yesu ampene Maria nsɛm no so? Ɛne sɛ, mprempren wadi mfirihyia 30. Adapɛn kakraa bi ni a wɔbɔɔ no asu, de honhom kronkron sraa no, na Osuboni Yohane de no kyerɛe sɛ “Onyankopɔn guammaa a oyi wiase bɔne kɔ no.” (Yohane 1:29-34; Luka 3:21-23) Afei de ɛsɛ sɛ akwankyerɛ a onya no fi Otumfoɔ Opumpuni a ɔsomaa no no nkyɛn. (1 Korintofo 11:3) Ná wɔremma obiara, obusuani a ɔbɛn no paa mpo kwan mma ontwitware Yesu ananmu wɔ adwuma a ɔbaa asase so sɛ ɔrebɛyɛ no mu. Hwɛ sɛnea Yesu nam mmuae a ɔde ma Maria no so da ne bo a wasi sɛ ɔbɛyɛ N’agya apɛde no adi! Ɛmmra sɛ yɛn nso, yebesi yɛn bo sɛ yebedi yɛn ‘asɛde nyinaa’ ho dwuma ama Onyankopɔn.—Ɔsɛnkafo 12:13.
5. Anwonwade bɛn na Yesu Kristo yɛ wɔ Kana, na nkɛntɛnso bɛn na enya wɔ afoforo so?
5 Esiane sɛ Maria te nea ne ba no ka no ase nti, ɔtwe ne ho ntɛm ara ka kyerɛ asomfo no sɛ: “Biribiara a obese mo no, monyɛ!” Na Yesu di ɔhaw no ho dwuma. Ɔma asomfo no de nsu hyehyɛ nhina no mama, na ɔdan nsu no nsa pa. Eyi yɛ Yesu tumi a ɔde yɛ anwonwade no mfiase, a ɛyɛ sɛnkyerɛnne a ɛkyerɛ sɛ Onyankopɔn honhom wɔ ne so. Bere a asuafo afoforo no hu anwonwade yi no, ɛhyɛ wɔn gyidi den.—Yohane 2:5-11.
Ɔbɔ Yehowa Fie Ho Mmɔden
6. Dɛn nti na Yesu bo fuw wɔ nea ohu wɔ Yerusalem asɔrefie hɔ no ho, na dɛn na ɔyɛ wɔ ho?
6 Seesei ara afe 30 Y.B., fefɛw bere adu, na Yesu ne n’ayɔnkofo no si kwan so kɔ Yerusalem sɛ wɔrekodi Twam no. Bere a wɔwɔ hɔ no, n’asuafo no hu sɛ wɔn Kannifo no reyɛ ade wɔ ɔkwan bi so a ɛbɛyɛ sɛ na wonhuu no saa da. Yudafo aguadifo adifudepɛfo no retɔn nguan ne mmorɔnoma a wɔde bɔ afɔre no wɔ asɔrefie hɔ pɛɛ. Na wɔde gye Yudafo asomfo anokwafo no aboɔden. Bere a ɛhyɛ Yesu abufuw no, ɔyɛ ho biribi. Ɔde hama yɛ mpire pam adetɔnfo no nyinaa. Ohwie sikasesafo no sika gu, ka wɔn apon butubutuw. Ɔhyɛ wɔn a wɔtɔn mmorɔnoma no sɛ: “Momfa eyinom mfi ha!” Bere a Yesu asuafo no hu no sɛ ɔreyɛ ade ɔhyew so saa no, wɔkae nkɔmhyɛ a ɛfa Onyankopɔn Ba no ho no: “Wo fi ho mmɔdenbɔ amene me.” (Yohane 2:13-17; Dwom 69:9) Yɛn nso, ɛsɛ sɛ yɛhwɛ yiye na yɛamma wiase su ansɛe yɛn som.
7. (a) Dɛn na ɛka Nikodemo ma ɔkɔ Mesia no nkyɛn? (b) Dɛn na yesua fi adanse a Yesu di Samariani bea no mu?
7 Yesu yɛ sɛnkyerɛnne pii wɔ Yerusalem ma nnipa pii gye no di. Nikodemo a ɔyɛ Sanhedrin, Yudafo asɛnnibea kunini no muni mpo ani gye Yesu ho, na ɔba ne nkyɛn anadwo besua nneɛma pii. Afei Yesu ne n’asuafo no tra “Yuda asase so” bɛyɛ asram awotwe, ka asɛm yɛ asuafo. Nanso, bere a wɔde Osuboni Yohane to afiase no, wofi Yudea kɔ Galilea. Bere a wɔnam Samaria mantam mu no, Yesu de hokwan no di Samariani bea bi adanse fefeefe. Eyi bue kwan ma Samariafo pii bɛyɛ gyidifo. Momma yɛn nso, yɛnyɛ krado sɛ yɛde hokwan biara bɛka Ahenni no ho asɛm.—Yohane 2:23; 3:1-22; 4:1-42; Marko 1:14.
Nkyerɛkyerɛ Adwuma Kɛse Wɔ Galilea
8. Adwuma bɛn na Yesu fi ase wɔ Galilea?
8 Ansa na “dɔn” a Yesu bewu no bedu no, na ɔwɔ pii a ɛsɛ sɛ ɔyɛ wɔ ne soro Agya no adwuma mu. Wɔ Galilea no, Yesu fi adwuma bi a ɛso sen Yudea ne Yerusalem de no mpo ase. Okyin ‘Galilea nyinaa kyerɛkyerɛ wɔn hyia adan mu, na ɔka ahenni no ho asɛmpa no, na ɔsa ɔyare ne ahoɔmmerɛw biara ɔman no mu.’ (Mateo 4:23) Ne nsɛm a ɛkanyan adwene: “Monsakra mo adwene; na ɔsoro ahenni no abɛn” no trɛw fa ɔmantam no nyinaa mu. (Mateo 4:17) Asram kakraa bi mu, bere a Osuboni Yohane asuafo no baanu ankasa ba bɛhwɛ nea wɔate afa Yesu ho no, ɔka kyerɛ wɔn sɛ: “Monkɔ nkɔka nea moahu ne nea moate nkyerɛ Yohane sɛ: Anifuraefo hu ade, mmubuafo nantew, akwatafo ho fi, asotifo te asɛm, awufo nyan, na wɔreka asɛmpa kyerɛ ahiafo; na nhyira ne nea merenyɛ no hintidua.”—Luka 7:22, 23.
9. Dɛn nti na nnipakuw ba Kristo Yesu nkyɛn, na asuade bɛn na yebetumi anya afi eyi mu?
9 ‘Wɔka Yesu ho asɛmpa wɔ nkurow a atwa hɔ ahyia nyinaa so,’ na nnipakuw kɛse ba ne nkyɛn—fi Galilea, Dekapoli, Yerusalem, Yudea, ne Yordan Asubɔnten no fã nohoa. (Luka 4:14, 15; Mateo 4:24, 25) Ɛnyɛ anwonwade a ɔyɛ no nko nti na wɔba ne nkyɛn, na mmom ne nkyerɛkyerɛ a na ɛyɛ nwonwa no nso. Ne nsɛm no yɛ dɛ na ɛhyɛ nkuran. (Mateo 5:1–7:27) Yesu nsɛm no ka koma na ɛyɛ dɛ. (Luka 4:22) Nnipakuw no ho ‘dwiriw wɔn wɔ ne nkyerɛkyerɛ no ho,’ efisɛ ofi Kyerɛwnsɛm no mu kyerɛkyerɛ wɔn sɛ nea ɔwɔ tumi. (Mateo 7:28, 29; Luka 4:32) Hena na ɔrenka nkɔ ɔbarima a ɔte saa ho? Ɛmmra sɛ yɛn nso yebenya ɔkyerɛkyerɛ su a ɛte saa sɛnea ɛbɛyɛ a ɛbɛtwetwe nnipa komapafo aba nokware no ho.
10. Dɛn nti na Nasaretfo bɔ mmɔden sɛ wobekum Yesu, nanso dɛn nti na wɔantumi ankum no?
10 Nanso, ɛnyɛ wɔn a wɔtee Yesu nsɛm no nyinaa na wotiee no. Wɔ ne som adwuma no mfiase mpo no, bere a ɔrekyerɛkyerɛ wɔ ne kurom hyiadan mu wɔ Nasaret no, wɔbɔ mmɔden sɛ wobekum no. Ɛwom sɛ ne ‘nsɛm a ɛka koma’ no ma ne kuromfo ho dwiriw wɔn de, nanso wɔpɛ sɛ wohu anwonwade. Nanso, sɛ anka Yesu bɛyɛ anwonwade pii wɔ hɔ no, ɔpa wɔn pɛsɛmenkominya ne gyidi a na wonni no ho ntama. Ɛhyɛ wɔn a wɔwɔ hyiadan mu hɔ no abufuw ma wɔsɔre so Yesu mu sunsum no fi hɔ de no kɔ bepɔw bi ho sɛ wɔrekosum no ahwe fam. Nanso ofi wɔn nsam kɔ a hwee nyɛ no. “Dɔn” a ɔde bewu nnya nnui.—Luka 4:16-30.
11. (a) Dɛn nti na nyamesom akannifo bi betiee Yesu? (b) Dɛn nti na wɔbɔ Yesu sobo sɛ wasɛe Homeda?
11 Mpɛn pii no, ɛyɛ a nyamesom akannifo—kyerɛwfo ne Farisifo, Sadukifo ne afoforo—kɔ mmeae a Yesu ka asɛm no. Wɔn mu pii wɔ hɔ a ɛnyɛ sɛ wɔrebetie asua biribi, na mmom sɛ wobenya ne ho mfomso na wɔasum no afiri. (Mateo 12:38; 16:1; Luka 5:17; 6:1, 2) Sɛ nhwɛso no, bere a Yesu kɔ Yerusalem kodi afe 31 Y.B., Twam afahyɛ no, ɔsa ɔbarima bi a wayare mfirihyia 38 yare. Yudafo nyamesom akannifo no bɔ Yesu sobo sɛ wasɛe Homeda. Obua sɛ: “M’agya gu so yɛ adwuma besi sesɛɛ, na me nso meyɛ adwuma.” Afei Yudafo no bɔ no sobo sɛ waka abususɛm sɛ ɔka sɛ ɔyɛ Onyankopɔn Ba denam frɛ a ɔfrɛ no N’agya no so. Wɔhwehwɛ sɛ wobekum Yesu, nanso ɔne n’asuafo no fi Yerusalem kɔ Galilea. Saa ara nso na sɛ yɛde yɛn ahoɔden reyɛ Ahenni asɛnka ne asuafoyɛ adwuma no a, nyansa nnim sɛ yɛne yɛn asɔretiafo bedi asi sɛnea ɛnsɛ.—Yohane 5:1-18; 6:1.
12. Yesu yɛ Galilea asasesin no mu adwuma kɛse dɛn?
12 Afe biako ne fã a edi hɔ anaa nea ɛte saa no, Yesu yɛ n’adwuma no fã kɛse no ara wɔ Galilea, na ɔkɔ Yerusalem bere a wɔredi Yudafo afe afe afahyɛ ahorow no nkutoo. Sɛ yɛka ne nyinaa bom a, wayɛ asɛnka ɔsatu abiɛsa wɔ Galilea: ɔne asuafo a wɔyɛ foforo 4 na ɛkɔ nea edi kan no, ɔne asomafo 12 no kɔ nea ɛto so abien no, na ɔsoma asomafo a na watete wɔn no nso kɔ kɛse no. Nokware no ho adanse kɛse a wodi wɔ Galilea bɛn ara ni!—Mateo 4:18-25; Luka 8:1-3; 9:1-6.
Adanse a Wodi no Akokoduru so Wɔ Yudea ne Perea
13, 14. (a) Bere bɛn mu na Yudafo no repɛ Yesu akyere no no? (b) Dɛn nti na asomfo no antumi ankyere Yesu?
13 Ɛyɛ afe 32 Y.B., otwabere, nanso na Yesu “dɔn” nnya nnui. Ná Asese Afahyɛ no abɛn. Afei Yesu nuanom ka kyerɛ no sɛ: “Fi ha kɔ Yudea.” Wɔpɛ sɛ Yesu ma wɔn a wɔahyiam wɔ afahyɛ no ase wɔ Yerusalem no nyinaa hu tumi a ɔde yɛ anwonwade no. Nanso, na Yesu nim asiane a ɛwom no. Enti ɔka kyerɛ ne nuanom sɛ: “Me de, minnya menkɔɔ afahyɛ yi ase; efisɛ me bere nnya nnui.”—Yohane 7:1-8.
14 Bere a Yesu twɛn kakra wɔ Galilea no, ɔkɔ Yerusalem a ‘onyi no ho adi, na mmom ohintaw.’ Yudafo no rehwehwɛ no wɔ afahyɛ no ase ankasa, na wobisa sɛ: “Ɔwɔ he?” Bere a afahyɛ no du mfinimfini no, Yesu kɔ asɔrefie hɔ, na ofi akokoduru mu kyerɛkyerɛ. Wɔhwehwɛ sɛ wɔkyere no, na ebia wɔde no ato afiase anaa wɔakum no. Nanso, wontumi efisɛ ne ‘dɔn nnya nnui.’ Nkurɔfo pii gye Yesu di afei. Asomfo a Farisifo no soma wɔn sɛ wɔnkɔkyere no no mpo de nsapan na ɛba bɛka sɛ: “Onipa biara nkasae sɛ onipa yi da.”—Yohane 7:9-14, 30-46.
15. Dɛn nti na Yudafo no tase abo sɛ wɔde rebesiw Yesu, na asɛnka ɔsatu bɛn na akyiri yi ofi ase?
15 Ntawntawdi a ɛkɔ so wɔ Yesu ne n’asɔretiafo a wɔyɛ Yudafo ntam no toa so bere a ɔkyerɛkyerɛ N’agya ho ade wɔ asɔrefie hɔ wɔ afahyɛ bere no mu no. Afahyɛ no da a etwa to no, Yesu asɛm a ɔka fa n’asetra ansa na ɔrebɛyɛ ɔdesani ho no hyɛ Yudafo no abufuw, na wɔtase abo sɛ wɔde rebesiw no. Nanso ohintaw, na oguan a hwee nyɛ no. (Yohane 8:12-59) Yesu fi Yerusalem na ofi asɛnka ɔsatu kɛse bi ase wɔ Yudea. Ɔpaw asuafo 70, na bere a wakyerɛkyerɛ wɔn awie no, ɔsoma wɔn baanu baanu ma wɔkɔyɛ adwuma wɔ asasesin no mu. Wodi Yesu anim kɔ kurow biara ne baabiara a na ɔne n’asomafo no abɔ wɔn tirim sɛ wɔbɛkɔ no.—Luka 10:1-24.
16. Asiane bɛn na Yesu guan fi mu wɔ Asɔrefidwira Afahyɛ no ase, na adwuma bɛn na ɔde ne ho hyem denneennen bio?
16 Wɔ afe 32 Y.B., awɔw bere mu no, Yesu “dɔn” no bɛn. Ɔba Yerusalem bedi Asɔrefidwira Afahyɛ. Yudafo no da so ara rehwehwɛ no akum no. Bere a Yesu nam asɔrefie abrannaa so no, wotwa ne ho hyia. Bere a wɔbɔ no sobo bio sɛ waka abususɛm no, wɔtase abo sɛ wɔde rebesiw no akum no. Nanso sɛnea Yesu yɛe wɔ bere a atwam mu no, oguan. Ɛno akyi pɛɛ no, ɔfa kwan so kɔkyerɛkyerɛ, a saa bere yi de ofi kurow so kɔ kurow so ne nkuraase wɔ Perea mantam mu wɔ Yudea, wɔ Yordan ntentenso. Na nnipa pii gyee no dii. Nanso nkra a ɛfa n’adamfo Lasaro ho no ma ɔsan kɔ Yudea.—Luka 13:33; Yohane 10:20-42.
17. (a) Nkra dennen bɛn na Yesu nsa ka bere a ogu so reka asɛm wɔ Perea no? (b) Dɛn na ɛkyerɛ sɛ Yesu nim atirimpɔw a ɛwɔ nea ɛsɛ sɛ ɔyɛ no akyi ne bere a na nsɛm besisi no?
17 Nkra dennen no fi Marta ne Maria, Lasaro nuabeanom a wɔte Betania wɔ Yudea no nkyɛn. Ɔsomafo no ka sɛ: “Awurade, hwɛ, nea wodɔ no no yare.” Yesu bua sɛ: “Ɔyare yi nyɛ owuyare, na Onyankopɔn anuonyam ntia, sɛ wɔbɛfa so ahyɛ Onyankopɔn ba no anuonyam.” Nea ɛbɛyɛ na wadi atirimpɔw yi ho dwuma no, Yesu hyɛ da tra baabi a ɔwɔ no nnanu. Afei ɔka kyerɛ n’asuafo no sɛ: “Momma yɛnkɔ Yudea bio!” Wofi adwenem naayɛ mu bua sɛ: “Rabi, nnansa yi ara na Yudafo hwehwɛe sɛ wosiw wo abo, na worekɔ hɔ bio yi?” Nanso Yesu nim sɛ ‘dɔn a aka ama no,’ anaa bere a Onyankopɔn ahyɛ ama n’asase so som adwuma no yɛ tiaa. Onim nea ɛsɛ sɛ ɔyɛ ankasa, ne nea enti a ɛsɛ sɛ ɔyɛ.—Yohane 11:1-10.
Anwonwade a Obiara Ntumi Mmu N’ani Ngu So
18. Bere a Yesu du Betania no, na tebea no te dɛn wɔ hɔ, na odu hɔ akyi no, dɛn na esi?
18 Marta na odi kan hyia Yesu wɔ Betania, na ɔka sɛ: “Awurade, sɛ wowɔ ha a, anka me nua anwu.” Maria ne wɔn a wɔaba wɔn fie hɔ no di akyi. Wɔn nyinaa resu. Yesu bisa sɛ: “Ɛhe na mode no toe?” Wobua sɛ: “Awurade, bra bɛhwɛ!” Bere a wodu ɔda no—ɔbodan a ɔbo hini ano—so no, Yesu ka sɛ: “Munyi ɔbo no!” Bere a Marta nte nea Yesu pɛ sɛ ɔyɛ ase no, ɔka sɛ: “Awurade, sesɛɛ de, wabɔn, na wadi nnannan.” Nanso Yesu bisa sɛ: “Manka mankyerɛ wo sɛ wugye di a, wubehu Nyankopɔn anuonyam?”—Yohane 11:17-40.
19. Dɛn nti na Yesu bɔ mpae wɔ baguam ansa na onyan Lasaro?
19 Bere a woyi ɔbo a ehini Lasaro da no ano no, Yesu teɛm bɔ mpae sɛnea ɛbɛyɛ a nkurɔfo no behu sɛ nea ɔrebɛyɛ no nam Onyankopɔn tumi so. Afei ɔde nne kɛse teɛm sɛ: “Lasaro, fi bra!” Na Lasaro fi adi a ɔda mu ntama da so kyekyere ne nan ne ne nsa, na dukuu kyekyere n’anim. Yesu ka sɛ: “Monsan no, na momma ɔnkɔ!”—Yohane 11:41-44.
20. Ɔkwan bɛn so na wɔn a Yesu nyanee Lasaro ma wohui no yɛɛ wɔn ade?
20 Bere a Yudafo a wɔaba rebegyam Marta ne Maria hu anwonwade yi no, wɔn mu pii gye Yesu di. Afoforo kɔ kɔka nea asi no kyerɛ Farisifo no. Dɛn na wɔyɛ? Ntɛm ara wɔne asɔfo mpanyin no frɛ Sanhedrin nhyiam. Wɔde ehu nwiinwii sɛ: “Dɛn na yɛbɛyɛ, efisɛ onipa yi yɛ nsɛnkyerɛnne pii. Sɛ yegyaa no saa a, nnipa nyinaa begye no adi, na Romafo aba abɛfa yɛn ha yi ne yɛn man.” Nanso Ɔsɔfo Panyin Kaiafa ka kyerɛ wɔn sɛ: “Mo de, munnim hwee, nanso munnwen sɛ eye ma mo sɛ onipa biako bewu ama ɔman, na ɔman no nyinaa ansɛe.” Enti efi saa da no wotu agyina wɔn mu sɛ wobekum Yesu.—Yohane 11:45-53.
21. Dɛn na Lasaro a wonyanee no no ma efii ase?
21 Enti ɛdenam Yesu nan ase a ɔtwentwɛnee ansa na ɔredu Betania so no, otumi yɛ anwonwade a obiara ntumi mmu n’ani ngu so. Yesu nam Onyankopɔn tumi so nyan ɔbarima a na wawu nnannan. Sanhedrin a wogye wɔn ho di no mpo hu eyi na wobu Anwonwadeyɛfo no kumfɔ! Enti anwonwade no di dwuma sɛ Yesu som adwuma no mu nsakrae bere titiriw—bere a na ne “dɔn nnya nnui” no dan yɛ bere a ne ‘dɔn adu.’
• Ɔkwan bɛn so na Yesu kyerɛe sɛ na onim adwuma a Onyankopɔn de ahyɛ ne nsa no?
• Dɛn nti na Yesu ampene nsa ho nyansahyɛ a ne maame de mae no so?
• Dɛn na yebetumi asua afi ɔkwan a Yesu faa so mpɛn pii ne n’asɔretiafo dii no mu?
• Dɛn nti na Yesu twentwɛnee ne nan ase wɔ Lasaro yare no ho?
[Mfonini ahorow wɔ kratafa 12]
Yesu de n’ahoɔden nyinaa yɛɛ adwuma a Onyankopɔn de hyɛɛ ne nsa no
Share Share “Ne Dɔn Nnya Nnui”
w00 9/15 kr. 10-15
Mmoa a Wɔhwehwɛ
Ɛrenkyɛ—Wiase a Abasamtu Nnim Bɛba
Onyankopɔn Ahenni Ho Asɛm a Wɔka Wɔ Fiji Nsupɔw no So
“Dɔn No Adu”
Dɛn Nti na Ɛsɛ sɛ Woda Ahofama Adi?
Bɔ Wo Din Ho ban
Ɔhobrɛasefo Yosia Nyaa Yehowa Anim dom
Text Baabi a wubetumi atwe nneɛma akenkan ƆWƐN-ABAN—NEA ADESUA NSƐM WOM September 15, 2000
Share Share ƆWƐN-ABAN—NEA ADESUA NSƐM WOM September 15, 2000
ƆWƐN-ABAN—NEA ADESUA NSƐM WOM September 15, 2000